Google Inotangisa Zvizere Homomorphic Encryption | Linux Vakapindwa muropa
ari Vagadziri veGoogle vaburitsa munguva pfupi yapfuura kuburikidza neye blog positi kufambira mberi kwe yakavhurika seti yemaraibhurari uye zvinoshandiswa pamwe nekuitwa kwe zvizere homomorphic cipher iyo inobvumidza kugadzirisa yakavharidzirwa dhata iyo isingaoneke mune yakavhurika fomu mune chero chikamu chekuverenga.
Kusiyana nekupedzisira-kusvika-kumagumo kunyorera, homomorphic encryption, Pamusoro pekudzivirira kufambiswa kwedata, inopa mukana wekugadzirisa data pasina kuibvisa.
Iyo yakazara homomorphic encryption zvinoreva kugona kuita kuwedzera nekuwedzera mashandiro pane data encrypted, kubva panogona kuitiswa chero kuverenga kwekumanikidza. Izvo zvinoburitswa mhedzisiro yakavharidzirwa, izvo zvingave zvakafanana nekunyorera mhedzisiro yekuita kwakafanana pane iyo yekutanga data.
Sevagadziri, ibasa redu kubatsira kuchengetedza vashandisi vedu kuchengeteka pamhepo uye kuchengetedza yavo data. Izvi zvinotanga nekugadzira zvigadzirwa zvakachengeteka nekutadza, zvakavanzika nekugadzirwa, uye kuisa vashandisi mukutonga. Zvese zvatinoita paGoogle zvinotsigirwa nemisimboti iyi, uye tinozvirumbidza nekuve mutungamiri weindasitiri mukuvandudza, kuita, uye kuyera hunyanzvi hwekuchengetedza zvakavanzika izvo zvinoita kuti tikwanise kuwana ruzivo rwakakosha nekugadzira zviitiko zvinobatsira isu tichidzivirira edu vashandisi. kuvanzika.
Kushanda nedhata neomomorphic encryption yakaderedzwa kune iyo mushandisi inonyora iyo data uye, pasina kuburitsa makiyi, inoiendesa kune yechitatu-bato sevhisi kuti igadziriswe.
Iri sevhisi rinoita kuverenga kwakaziviswa uye rinogadzira yakavharidzirwa mhedzisiro, tisingakwanise kuona kuti ndeipi dhata inoshanda. Mushandisi anodzinga dhiyo renhepfenyuro achishandisa makiyi ake uye anogamuchira mhedzisiro muzvinyorwa zvakajeka.
Semuenzaniso, fungidzira kuti urikugadzira Anwendung kune vanhu vane chirwere cheshuga. Iyi Anwendung inogona kuunganidza ruzivo rwakashata kubva kune vashandisi vayo, uye iwe unoda nzira yekuchengeta iyi data yakavanzika uye yakachengetedzwa uchigovana nayo nenyanzvi dzezvehutano kuti uwane ruzivo rwakakosha rwunogona kutungamira mukukosha kwekurapa. NeGoogle Transpiler yeFHE, unogona kunyorera data raunotora nekugovana naro nenyanzvi dzezvekurapa, idzo dzinogona kuongorora iyo data dzisingaibatanidze, dzichipa ruzivo rwakakosha kunharaunda yekurapa, ichiona kuti ruzivo rwepasi harugone kuwanikwa ne chero munhu.
Pakati pekushandisa nzvimbo homomorphic ciphers inowanikwa kugadzirwa kwemasevhisi egore ekuvanzika komputa, kuitwa kwe michina yekuvhota yemagetsi, kugadzirwa kweasina kuzivikanwa nzira dzekufambisa, kugadziriswa kwezvikumbiro pane yakavharidzirwa dhata muDBMS, uye zvakavanzika kudzidziswa kwemachina ekufunda masisitimu.
Semuenzaniso, homomorphic encryption ichave inobatsira mukushandisa kwekurapa Ivo vanogona kugamuchira zvakavanzika ruzivo rwemurwere mune yakavharidzirwa fomu uye vape vezvekurapa kugona kuita ongororo uye kuona zvisakanaka pasina decryption.
Homomorphic encryption inogona zvakare kubatsira mukuferefetwa kwehukama pakati pezvirwere uye mamwe magene ekuchinja, ayo anoda kuongororwa kwezviuru zvemienzaniso yegene ruzivo.
Ndosaka nhasi, tiri kufara kuzivisa kuti tiri kuwana yekutanga-ye-iyo-mhando, yakajairika-chinangwa mutakurwi weiyo yakazara homomorphic encryption (FHE), iyo inobvumidza vanogadzira kuti vaite kuverenga pane yakavharirwa dhata vasina kukwanisa kuwana chero ruzivo kubva mairi.
Chinhu chakasarudzika kubva kubhuku rakaburitswa iko kugona kugadzira zvirongwa zvekutora data rakanyorwa uchishandisa zviyero zveC ++ zvekuvandudza uchishandisa mutakuri wakapihwa, chirongwa cheC ++ chinoshanduka kuita chakakosha FHE-C ++ mutauro unokwanisa kushanda nedata rakanyorwa.
Iyo yekushandisa inoita kuti iwe ugadzire zvakavanzika kuverenga manhamba anogona kushanda nedata pasina kuibvisa, kusanganisira kuita yakapusa tambo uye math mashandiro pane yakavharidzirwa data. Iyo kodhi yeprojekiti yakanyorwa muC ++ uye inogoverwa pasi peiyo Apache 2.0 rezinesi.
Pakupedzisira hongu unofarira kugona kuziva zvakawanda nezvazvo panhau iyi, unogona kutarisa ruzivo mu chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google Inotangisa Zvizere Homomorphic Encryption